दुखद खबर : अभागी आमा चम्ल्याहा बच्चाको जन्म त दीईन तर मुख हेर्न पहीन्न, आमाको मृत्यु – Dainik Samchar
April 3, 2021 159
भएको छ। झण्डै नौं महिनाको गर्भपछि शल्यक्रिया मार्फत् मंगलबार चार शिशु जन्माएकी आमाको बुधबार २ बजे मृत्यु भएको हो। चार शिशुमध्ये दुई शिशुको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको तर दुई जनाको अवस्था भने अस्थिर देखिएको शल्यक्रियामा संलग्न चिकित्सक डा. एसके सिंहले बताए।
Prevवातावरण मा अझै सुधार नआएकाले थप ७ दिन विद्यालय बन्द गर्ने मन्त्रालयको निर्णय ?
एकतर्फी मन पराएका दिनेशले निर्णय लिएको त्यो ३ बजेर १५ मिनेटको समय
दु:खद खबर : दुर्घटना टेकमाया र उनका नाबालक छोराको निधन 18 mins अघि